जीवाणुरोधी नौंवोन कपडा
चाँदी आयन जीवाणुरोधी एजेंट
कपर आयन जीवाणुरोधी एजेंट
जिंक आयन जीवाणुरोधी एजेंट
कम्पाउन्डिंग जीवाणुरोधी एजेंट
चाँदी आयन जीवाणुरोधी समाधान
चिनियाँ वेबसाइट (एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट)
चिनियाँ वेबसाइट (एन्टि-हाइड्रोलिसीस एजेन्ट)
सबै उत्पाद कोटीहरू
जीवाणुरोधी गैर बुना कपडा के हो?
२०२० महामारीले जनतालाई गैर बुनेका सामग्रीका साथ परिचित मात्र बनाएको छैन, तर यसको अनुप्रयोग र मास्कमा कार्यद्वारा जनतालाई पनि प्रभावित पार्यो। वास्तवमा, गैर बुनेका कपडाहरू सामान्य चिकित्सा र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हुन्, र मास्क, सुरक्षात्मक कपडा, ... मा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगहरू छन्।
प्रकटीकरण: कसरी जीवाणुरोधी सामग्रीहरू उत्पादन गरिन्छ?
२१-०3- on० मा प्रशासक द्वारा
महामारी पछि, सबैलाई एन्टिमाइक्रोबियलस बारे सजगता सामान्यतया बढेको छ। जीवाणुरोधी औषधीहरू चाँडै नै सार्वजनिक क्षेत्रको दृश्यमा देखा पर्‍यो। जीवाणुरोधी उत्पादों का मूल एन्टिब्याक्टेरियल सामग्रीमा निहित छ! त्यसो भए कसरी जीवाणुरोधी पदार्थ उत्पादन हुन्छ? लांग्याइ नयाँ मेट ...
एन्टिमाइक्रोबियल फोन केस - एन्टिब्याक्टेरियल प्लास्टिकको लोकप्रिय अनुप्रयोग
२१-०3-२4 मा प्रशासक द्वारा
हाम्रो दैनिक जीवन मोबाइल फोनसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। व्यक्तिहरू मोबाइल फोनमा बढी भर पर्दैछन्। मोबाइल फोनमा ब्याक्टेरियाहरू सजिलैसँग बेवास्ता गरिन्छ अधिकांश मानिसहरूले। सर्वेक्षण अनुसार, phones २% मोबाइल फोन र of२% मालिकहरूले हातमा ब्याक्टेरिया बोक्छन्। ती मध्ये, 25% मोबाइल ...
एन्टिब्याक्टेरियल प्लास्टिकको पाँच तयारी विधिहरू
द्रुत आर्थिक विकास र व्यक्तिको जीवन स्तरको निरन्तर सुधारको साथ, मानिसहरूले उनीहरूको आफ्नो आरामदायी, स्वस्थ र सुरक्षित जीवन वातावरणमा बढी र अधिक ध्यान दिइरहेका छन्। जे होस्, त्यहाँ प्राय: ब्याक्टेरियाहरू, मोल्डहरू र वस्तुहरूमा भाइरसहरू छन्।
सेवा केस | PET monofilament hydrolysis को समस्या समाधान गर्नुहोस्
२१-०3-०5 मा व्यवस्थापक द्वारा
Description समस्या वर्णन】 कागज उद्योगमा प्रयोग गर्ने सुकाउने फिल्टर PET मोनोफिलामेन्ट हो। यो लामो समयको लागि उच्च तापक्रम र आर्द्र वातावरणमा प्रयोग हुन्छ। पीईटी फिल्टर हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रियाको खतरामा छ। PET मोनोफिलामेन्टमा HyMax® anti-hydrolysis एजेंट थप्नाले सेवा विस्तार गर्न सक्दछ ...
कपर आयन जीवाणुरोधी फाइबर के हो?
२१-०२-२5 मा प्रशासक द्वारा
मेटल आयन एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्टहरू सहित थपिएका कृत्रिम जीवाणुरोधी फाइबरहरू हालका वर्षहरूमा द्रुत रूपमा विकसित भएको छ। योसँग उच्च सुरक्षा र कुनै औषधि प्रतिरोधको विशेषता छैन, विशेष गरी यसको उत्कृष्ट तातो प्रतिरोध र रासायनिक स्थिरता, र फाइबर र अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
कसरी चाँदीको antimicrobial कपडा उत्पादन गर्न?
२१-०२-०3 मा व्यवस्थापक द्वारा
रजत एन्टिमाइक्रोबियल फेब्रिक एन्टिमाइक्रोबियल गुणहरूको साथ एक नयाँ प्रकारको फाइबर हो। त्यहाँ चाँदीको एन्टिमाइक्रोबियल कपडा उत्पादन गर्न दुई तरिकाहरू छन्। एउटा विधि भनेको कपडाको सतहमा चाँदीको आयन जीवाणुरोधी एजेन्ट जोड्नु हो, र अर्को विधि यसलाई dir थप्नु हो ...
प्राचीनहरूले कसरी ब्याक्टेरिया रोक्न चाँदी र तामा प्रयोग गर्‍यो?
प्राचीन समयमा, वातावरणीय सरसफाईको बारेमा जनताको चेतना अपेक्षाकृत कमजोर थियो, र रोगहरू रोक्न र निदान गर्ने तिनीहरूको क्षमता धेरै कम थियो। कोटेरा, क्षयरोग, र पेचिश जस्ता ब्याक्टेरिया संक्रमणको कारण विभिन्न रोगहरू। मानिसहरूलाई त्यतिखेर के थाहा थिएन के ...
महामारी पुनरावृत्ति, लान्गीको चाँदीको आयन जीवाणुरोधी कालो टेक्नोलोजी मास्क संरक्षण अपग्रेड गर्दछ
२१-०१-२8 मा प्रशासक द्वारा
हालसालै, नयाँ मुकुट महामारीले चीनमा दोहोरिन लागेको देखाएको छ। स्थानीय सरकारहरूले महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणलाई सुदृढ पार्न थालेपछि मानिसहरूले आफ्नो संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गरे। मास्क लगाउनु भनेको सबैभन्दा बाहिरको सुरक्षा हो। मास्कहरू बनेका छन् ...
किन चाँदीको आयनमा स्थायी जीवाणुरोधी प्रभाव हुन सक्छ?
जब चाँदीको परमाणुले एक वा बढी इलेक्ट्रोनहरू गुमाउँछ, तिनीहरू चाँदीको आयन हुन्छन्। चाँदी आयनहरूको सामान्यतया तीन भ्यालेन्स अवस्था हुन्छ: Ag +, Ag2 + र Ag3 +। चाँदी आयनहरूसँग अक्सिडाइजिंग गुणहरू छन् र औषधीको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, जुन आधुनिक फार्माकोपियामा रेकर्ड गरिएको छ। त्यहाँ चाँदी आयनहरू सहित चार औषधिहरू छन् ...
पॉलिस्टरको anti-hydrolysis समाधान (PET PBT)
Polyurethane विशेष गुणहरूको साथ बहुलक सामग्रीको एक प्रकार हो। यसले प्लास्टिक, ईलास्टोमर देखि कोटिंग्ससम्म विभिन्न सामग्रीहरूको प्रदर्शन विशेषताहरूको संयोजन गर्दछ, जस्तै कडाई, उच्च शक्ति, लगाउने प्रतिरोध, राम्रो कम्पन शोषण, विकिरण प्रतिरोध, र एयर पीई जस्ता विस्तृत श्रृंखला ...
Anti-hydrolysis एजेंटको समारोह
२१-०१-१-15 मा प्रशासक द्वारा
नमीले पोलिमरको बिभिन्न गुणलाई असर गर्छ। सिलिका जेल, संशोधित सिलिका जेल, वा आइसोसाइनेटले पानीको साथ द्रुत प्रतिक्रिया गर्दछ। त्यसकारण, कच्चा पदार्थको स्थिरता कायम गर्न भण्डारनको बेला ओसिलो स्केभेन्जर (ओसिलो स्वेभेन्जर) थप्नु आवश्यक छ। कडा र मोल्ड गरिएको पॉलिमरहरूको लागि ...
ठेगाना: No.1 Bldg।, No.18 Yonghang Rd।, Songjiang Dist।, সাংघाई, २०१99,, PRC
फोन: +86 021 6779 9029
हाम्रो उत्पादनहरू वा प्रिसेलिस्टको बारेमा सोधपुछको लागि, कृपया हामीलाई छोड्नुहोस् र हामी २ 24 घण्टामा सम्पर्कमा हुनेछौं।
© प्रतिलिपि अधिकार - २०१०-२०२०: सबै अधिकार सुरक्षित। तातो उत्पादनहरू, साइटम्याप, एएमपी मोबाइल
रजत आयन जीवाणुरोधी एजेंट, एन्टि भाइरस योजक, Anti Hydrolysis Additive, जीवाणुरोधी मास्टरब्याच, एन्टिमिक्रोबायल एजेन्ट, जीवाणुरोधी सूत,
नि: शुल्क नमूना अनुप्रयोग